वलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र पुनः शुरू
गलकोट । कोरोना भाइरस र लामो वर्षात्का कारण प्रभावित बनेको बलेवा विमानस्थलको धावनमार्गको कालोपत्र गर्ने काम पुनः अगाडि बढेको छ । गत आर्थिक मसान्त २०७६/७७ भित्रै धावनमार्गको कालोपत्र गर्न ग्राभेल गर्ने लक्ष्य राखिए पनि शुरूमा कोराना भाइरस र लगातारको वर्षाका कारण विमानस्थलको काम प्रभावित बने पनि वर्षा रोकिएपछि कालोपत्रका लागि आवश्यक कामले तीव्रता पाएको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित बनेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धानवमार्ग (रनवे) कालोपत्रको पूर्वाधार निर्माणले पुनः गति लिएको हो । विमानस्थललाई बाह्रै महीना सञ्चालनका लागि धावनमार्ग कालोपत्र गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्कामार्फत २०७६ फागुनमा काम शुरू गरेको थियो । तर बन्दाबन्दी र वर्षाका कारण प्रभावित बन्दै आएकाले धावनमार्ग कालोपत्रको काम केही समय पछाडिधकेलिएको छ । अहिले धावनमार्गको कालोपत्र गर्ने भागको कटिङ सकिएर ग्राभेलको काम शुरू गर्न थालिएको कालोपत्रको जिम्मा लिएको काष्ठमण्डम उमा एण्ड कम्पनी जेभी बल्खुका आधिकारिक प्रतिनिधि वासु थापाले जानकारी दिए । ‘हामीले शुरूमा कोरोना भाइरस र लगातारको वर्षाका कारण काम गर्न सकेका थिएनौं,’ थापाले भने, ‘वर्षा रोकिएपछि दुई हप्ता अगाडिदेखि निर्माणमा तीव्रता दिँदा कटिङको काम सकिएको छ । ग्राभेल संकलन गरिरहेको र तिहारलगत्तै ग्राभेल गरिनेछ ।’ अहिले कालोपत्रका लागि चाहिने ग्राभेल कालीगण्डकी कोरिडोरमा खसेको पहिरो उठाएर ल्याउने काम भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी समय लाग्ने कटिङलाई लाग्ने भए पनि पूर्णरूपमा कटिङको काम सकिएर ग्राभेल बिच्छ्याउने तयारीमा जुटेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । आगामी वैशाखसम्म विमानस्थलको निर्माण सक्ने ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ । धावनमार्ग कालोपत्र गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा रू. ४ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी फागुनभित्र विमानस्थलको ७०० मिटर लम्बाइ तथा २२ मिटर चौडाइ धावनमार्ग कालोपत्र सक्नेगरी प्राधिकरणले काष्ठमण्डप उमा एण्ड कम्पनी जेभी बल्खुसँग रू. ७ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कोरोना र वर्षाका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएकाले सम्झौता अवधिभित्रै धावनमार्ग कालोपत्रका लागि समस्या हुने देखिएको छ ।
विमानस्थलको धावनमार्ग र विमान पार्किङ कालोपत्रसँगै विमानस्थल क्षेत्रको तारबार र नाली निर्माण गरिनेछ । निर्माण कम्पनीका कारण कालोपत्रमा ढिलाइ नभए पनि कोरोना र वर्षाका कारण समस्या भए पनि पछिल्लो समय निर्माणले गति दिएको प्राधिकरणका प्रतिनिधि दीपक बगालेले बताए । रासस